Ny tantarantsika | HONGGUANG HANDAN CAST FOUNDRY CO., LTD
Hongguang Foundry miorina ao amin'ny faritany Jize, faritanin'i Hebei, miaraka amina renivohitra voasoratra anarana 500000 yuan, amidy amin'ny tsena eropeana ireo vokatra ireo miaraka amin'ny fidiram-bola 7,04 tapitrisa yuan.
Manomboka amin'ny fomba famokarana atrikasa nentim-paharazana ka hatramin'ny famokarana masinina.
Izy io dia isaina ho toy ny orinasa fiarovana lehibe eto an-tanàna.
Sokafy ny tsenan'i Etazonia, manao tetik'asa mpanjifa amerikana ary ampidiro ny tsipika famokarana fasika resin.
Ny Banky Fambolena any Sina dia voasokajy ho orinasa mpampindram-bola AAA amin'ny taona 2001.
Tamin'ny volana Jona 2000 Zhongtong Steel Structure Construction Co., Ltd dia niforona.
Nomena anarana hoe Handan Avision Foundry Co. izy, izay manana renivohitra 5 tapitrisa yuan voasoratra.
Nomena mari-boninahitra "fampandrosoana ny orinasa tsy miankina Jize County" izy io.
Midira ao amin'ny Chamber of Commerce China ho an'ny fanafarana sy fanondranana ireo vokatra mekanika sy elektrika.
Ny fandresena amin'ny raharaha anti-dumping voalohany amin'ny indostria fandrafetana dia hahazo toerana ho an'ireo orinasan'ny orinasa mpamokatra vy any Sina amin'ny fampandrosoana iraisam-pirenena.
Ny Banky Fambolena any Sina dia voasokajy ho orinasa mpampindram-bola AAA amin'ny taona 2004.
Amin'ny alàlan'ny ISO90001 fanamarinana rafitra kalitao iraisam-pirenena sy fanamarinana BSI.
Manambola amin'ny fananganana ZZ416B boaty fisarahana mitsivalana tsipika famokarana tsindrona maimaimpoana.
Voasokajy ho orinasa tanàn-dehibe tena tsara, mpandoa hetra ary orinasa kintana.
Ny fizarana faharoa mitsangana ary tsy misy tsipika famokarana tsindrona boaty apetraka.
Nihoatra ny 100 tapitrisa yuan ny karama ary 10 tapitrisa 350 tapitrisa yuan ny hetra.
Ny orinasa dia manavao sy manova, manitatra bebe kokoa ny famokarana, ary manolotra tsipika famokarana tsindry static mandeha ho azy tanteraka miaraka amin'ny famokarana casting 15.000 taonina isan-taona.
Ny renivohitra voasoratra dia niova ho 20 tapitrisa yuan.
"Fikarohana vy manarona manarona" ny famokarana fenitra ny indostrian'ny vokatra ny fotodrafitrasa fikarohana ara-teknika any Beijing
Mandraisa anjara amin'ny fananganana ny "fenitra indostrialy ho an'ny fonosana vy, grates ary kojakoja" an'ny Fikambanana Foundry China.
Manatevin-daharana ny Fikambanana mpanorina orinasa any Sina, ny hetra aloa hatramin'ny faran'ny taona dia nahatratra 100 tapitrisa yuan.
Ny renivohitra voasoratra dia niova ho 50 tapitrisa yuan.
Ny orinasa dia nanadihady tsy miankina ary namolavola lafaoro rotira fandoroana oxygen mba hamahana ny fahalotoan'ny tontolo iainana vokatry ny fihenan'ny cupola.
Ny fampiasana feno ny gazy voajanahary sy ny teknolojia fandoroana oxygen madio dia maneho ny andraikitra ara-tsosialy sy ny foto-kevitry ny orinasa mandroso amin'ny Hongguang Casting sy ny Blue Energy Equipment ho setrin'ny fihenan'ny angovo nasionaly sy ny fihenan'ny famoahana ny emission, ny karbaona ambany ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Ity tetik'asa ity dia misy dikany lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy tombontsoa ara-tsosialy.